मनोरञ्जन खबर – Page 19 – JanaSanchar.com
‘छक्का पन्जा’को ५१ दिनमा दुलही बनिन् दीपा !
भदौ २४ गते रिलिज भएको चलचित्र ‘छक्का पन्जा’ले नेपालको इतिहासमै सर्वाधिक व्यापार गर्ने चलचित्रको रेकर्ड बनाएको छ । साथमा सर्वाधिक धेरै हलमा ५१ दिन मनाउने चलचित्रको रेकर्ड पनि यहि चलचित्रले बनाएको छ । काठमाण्डौका अधिकांश मल्टिप्लेक्स र सिंगल हलमा चलचित्रले आज ५१ दिन मनाएको छ । जसको खुशियालीमा आज चलचित्रका कलाकार र निर्माणपक्ष हल-हलमा..
रकम हिनामिनाको आरोपमा गीतकार योगेन्द्रमणि पक्राउ
गीतकार सङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्रमणि दाहाल रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । उनलाई महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुरको टोलीले मङ्गलबार बालुवाटारबाट पक्राउ गरेको हो । उनलाई उनी कार्यरत संस्था नेपाल बिटुमिन एन्ड ब्यारेल लिमिटेडको रु १२ करोड ३५ लाख हिनामिना गरेको आरोप लागेकाले पक्राउ गरिएको ललितपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक ईश्वर..
नायिका श्वेता खड्काको मुहारमा चमत्कारिक मुस्कान
पति वियोगको पिडाबाट गुज्री रहेकी नायिका श्वेता खड्का आँशुको भेलमा डुबेकी थिईन उनको सुन्दर मुहारमा थिएन मुस्कान केवल फिक्का मलिन अनुहार केवल चिन्ता र शोकले बिताईन लामो समय, सायद त्यो क्षण सम्झिदा कसैले पनि नायिका श्वेताको मुहारमा मुस्कान फेरी फर्किन्छ भनेर काल्पन सम्म गर्न सक्दैन थिए खुसीको कुरा यो होकी उनको मुहारमा मन्द मुस्कान खुसीको..
टिकाको दिन छबिको चौथो र शिल्पाको दोस्रो बिहे
कलाकार रेखा थापा सँग सम्बन्ध बिच्छेद गरेर बसेका चलचित्र निर्माता छवि ओझाले आज बिजया दशमीको टिकाको साईत् पारेर शिल्पा पोखरेलसंग बिबाह गर्दैछन । लामो समयदेखि प्रेममा रहेका छवी ओझा र शिल्पा पोखरेलले दशैको टिकाको दिन (मंगलबार) बिहे गर्न लागेको स्रोतले जानकारी गराएको छ । ओझाले चौथो विवाह गर्न लागेका हुन् । ‘एक्लै बस्न नसक्ने भएँ, त्यही भएर..
मासु नभर्इ भागै बस्दिनन् ज्योति मगर
ग्ल्यामरस सिंगरको रुपमा चिनिएकी ज्योति मगरको मोटो ज्यानको त्यसै भएको होइन । रोल्पामा जन्मेकी यी गायिका मोटी हुनुमा खान पानले पनि भुमिका खेलेको छ । उनी भन्छिन् ‘प्रत्येक छाकमा मासु खाने गरेकी छु’ । उनलाई पोर्क र बफ विषेश मन पर्छ । फुर्सदको वेला पोर्क र बफका परिकार आफैं बनाउँछिन् । आफैंले आफ्नै घरमा बनाएको मासुका परिकार मन पराउने..
मुरलीधरले हिन्दी फिल्म खेल्न किन छोडे?
सन् १९८७ मा शेखर कपुरको निर्देशनमा ‘साइन्स फिक्सन’ फिल्म ‘मिस्टर इन्डिया’ बन्ने लगभग तय भएपछि यसको पात्रलाई लिएर ठूलो बहस भयो। फिल्मको कथा लेखिरहेका थिए, बलिउडका चर्चित जोडी सलिम (खान) र जावेद (अख्तर) ले। कथा लेखनकै क्रममा तय भयो, फिल्म निर्माता बोनी कपुर भएका कारण मुख्य रोलमा अनिल कपुर। हिरोइनको रुपमा श्रीदेवी र भिलेनमा अमरीश पुरी।..
‘म मस्तानी हुन चाहन्न, मलाई बिबाहित पुरुषको घर विगार्नु छैन’: प्रियंका कार्की
पतिसँग डिभोर्स गरेर नेपाल आएपछि नायिका प्रियंका कार्की चलचित्र क्षेत्रमा व्यस्त छिन् । अहिलेकी चर्चित नायिकाको हातमा कार्यक्रम, चलचित्रको कमी छैन । गसिप बजारमा सर्वाधिक धेरै रमाउने प्रियंकाले श्रीमान्लाई समय-समयमा मिस त गर्दिरहिछन् । उनले अभिनय गरिरहेको चलचित्र ‘अनागत’ श्रीमान्-श्रीमतिको कथामा आधारित छ । यसैले उनीसँग हामीले..
बर्षाले प्रचारमा साथ नदिँदा निर्माता-निर्देशकको आक्रोश
चलचित्रमा काम गरेपछि त्यसको प्रचारप्रसारमा साथ दिनु कलाकारको दायित्व पनि हो । चलचित्र सफल हुँदा आफू हिट भएको भन्दै कुर्लने नेपालका कलाकार असफल हुँदा त्यसको जिम्मेवारी लिन चाहन्नन् । यतिमात्र होइन, चलचित्रको प्रचारमा साथ नै नदिने केही कलाकार हिट भएपछि भने आफ्नो चलचित्र भन्दै मिडियामा बोल्दै पनि हिडेका छन् । नायिका बर्षा सिवाकोटी..
प्रिंयका कार्कीलाई कस्ले दियो,चार लाखको औठी गिफ्ट ?
यो नियती भन्ने चीज पनि कस्तो - ‘जोकर’ द्धारा निर्मित र तिनै जोकर अभिनित चलचित्र छक्का पञ्जामा नायिकाको रुपमा अभिनित प्रिंयका कार्की जोकरहरुकै भीडमा हराएकी छिन । झण्डै नौ करोडको व्यापार गरिसकेको यो चलचित्रमा अभिनय गर्ने अरु जोकर कलाकारहरुको अभिनयको चर्चा परिचर्चा भइरँहदा उनी चर्चामा छैनन । हुन त प्रिंयकाको यस्तो नियती यो चलचित्रमा..
मेकअप र पहिरनमा सधै सजग स्वेता
नायिका स्वेता खड्काका पहिरन अहिले धेरैको नजर पर्ने खालका छन् । स्वेताको मेकअप, हेयर स्टाइल समेत आकर्षक देखिन्छन् । स्वेतालाई लाग्छ कलाकारका लागि यी कुरा भनेको नाट्यश्वेरी हो । यसैले उनी कम कार्यक्रममा सहभागी हुन्छिन्, तर सधै नै पहिरन र मेकअपमा ध्यान दिन्छिन् । यी कुरा आफ्ना लागि भगवान् भएको स्वेताको भनाई छ । बिहान ७ बजे घडी कराएपछि मात्र..